Tafatafa niarahana tamin’i Cristina Quisbert ao amin’ny Voces Bolivianas · Global Voices teny Malagasy
Tafatafa niarahana tamin'i Cristina Quisbert ao amin'ny Voces Bolivianas
Voadika ny 13 Septambra 2018 5:00 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny Desambra 2007)
Ny Voces Bolivianas (‘Feo Boliviana’) dia iray amin'ireo tetikasa fampahalalam-baovaon'olon-tsotra dimy voalohany nahazo ny vatsy kely avy amin'ny Rising Voices tamin'ny volana Jolay. Nikarakara andiana atrikasa efatra isan-kerinandro tao amin'ny cybercafe iray ao El Alto, Bolivia ireo tetikasa fitaratra roa voalohany, tarihan'i Mario Duran, Eduardo Ávila, sy Hugo Miranda. Ankoatra ny maha tanàn-dehibe voerana indrindra manerantany azy, fantatra amin'ny mponiny indizeny maro an'isa sy ny anjara andraikiny tamin'ny ady gazy Boliviana tamin'ny taona 2003 i El Alto. Na dia toera-pidirana ho an'ireo mpitsidika iraisam-pirenena rehetra aza i El Alto, dia matetika tsy mifandray amin'ny firenena hafa, na amin'ny aterineto na ivelan'ny aterineto izy.
Raha atambatra, nampiofana mpandray anjara 23 ny tetikasa fitaratra El Alto Voces Bolivianas, izay fampiofanana momba ny fibilaogina, fandefasana sary nomerika, ary koa fakàna sarimihetsika. Iray tamin'ireo feo vaovao tsy miovaova sy mazava indrindra avy amin'ny vondrona i Cristina Quisbert, mpianatra eny amin'ny oniversite izay manoratra ao amin'ny Bolivia Indígena (“Bolivia Indizeny”). Tsara fanahy izy ka nanaiky ny resadresaka tamin'ny mailaka.
Inona no nanosika anao hiaraka amin'ny Voices Boliviana? Ahoana no nahalalanao izany?
Fantatro tamin'ny alàlan'ny aterineto ny Voces Bolivianas. Nikarakara fihaonamben'ny Bloguivianos izy ireo tamin'izany. Nahaliana ahy ny fandraisana anjara tamin'ny tetikasa satria toerana iray ahafahanay maneho ny hevitray izany. Tahaka ny mandefa amin'ny radio- misy olona miteny ary olona maro mihaino avy any amin'ny toerana marobe.
Inona no fahatsapanao voalohany avy amin'ny Voces Bolivianas sy ny famahanana blaogy amin'ny ankapobeny?
Heveriko fa mpisava lalana eo amin'ny fanomezana fahalalana ny Voces Bolivianas raha hiditra sy hanatevin-daharana ny tontolon'ny blaogy virtoaly. Ho ahy, tetezana ahafahana mifandray amin'ny hafa ny Voces Bolivianas.
Zava-baovao ny famahanana bilaogy, mandrisika, mahafa-po, ary mandroso izay miampita ny sakana. Afaka mitrandraka loko, sary, teny, sns ianao. Nanomboka nibilaogy aho izay somary mahagaga; Tsy nieritreritra mihitsy aho hoe afaka mamolavola bilaogy, mamoaka lahatsoratra, ary mandrakitra zava-baovao izay ianarako.
Tsikaritro fa betsaka kokoa ny lehilahy mihoatra noho ny vehivavy ao amin'ny Voces Bolivianas. Heverinao ve fa misarika kokoa ny sain'ny lehilahy ny blaogy mihoatra noho ny vehivavy?
Any amin'ny faritra ambanivohitra, ny tovovavy no voalohany miala an-tsekoly, amin'ny ankapobeny dia vitsy kokoa noho ny tovolahy ny ankamaroan'ny tovovavy mahavita ny fianaran'izy ireo. Vokatry ny hoe ambony kokoa ny tsy fahaiza-mamaky teny eo amin'ny vehivavy noho ny lehilahy izany. Manoloana ny fahafahana miditra amin'ny teknolojia sy ny fampahalalam-baovao an-tserasera, dia mitohy ny elanelana. Heveriko fa mbola tsy fantatry ny vehivavy maro any Bolivia ny famahanana blaogy. Amin'ny maha zava-baovao azy, dia tsy maro ny olona mahatakatra ny fomba ahafahan'izany manampy azy ireo amin'ny asany.
Nahoana ianao no nisafidy ny lohateny hoe Bolivia Indígena (‘Bolivia indizeny’) ho an'ny blaoginao?
Tena ahitana karazan'olona i Bolivia eo amin'ny resaka mponiny indizeny. Misy ireo vondrona teratany maherin'ny 30 izay ny Aymara, Quechua sy Guarani, no lehibe indrindra. Saingy misy vondrona hafa koa. Araka ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2001, 62% amin'ireo Boliviana no milaza ny tenany fa teratany ary nitombo nandritra ny taona maro izany. Ho ahy, zava-dehibe ny mahafantatra momba ny famantarana ny razambenay. Bolivia Indígena, raha ny hevitro, dia anarana maneho ny tena fisian'ity firenena ity.
Tahaka ny hoe tamin'ny volana voalohan'ny blaoginao, nanoratra betsaka mikasika ny tanànan'i El Alto ianao, saingy ankehitriny dia mifantoka amin'ny lohahevitra isan-karazany ianao. Ahoana no niovan'ny votoatin'ny blaoginao?
Raha ny marina dia nanoratra bebe kokoa momba ny fiainana andavanandro any El Alto aho. Natao samihafa ny votoatin'ny bilaogy nanomboka tamin'izany. Nanohy nanoratra momba an'i El Alto ihany aho, saingy nampiditra lohahevitra hafa ihany koa izay mikasika ny zava-misy eto Bolivia sy ireo foko indizeny any amin'ny firenen-kafa. Rehefa nanomboka ity bilaogy ity aho, dia nieritreritra fa hifantoka bebe kokoa amin'ny tantara ny votoaty, saingy nanohy nivoatra hatrany ny lohahevitra ary dia lasa nifantoka bebe kokoa tamin'ny fiainana andavanandro.
Tao amin'ny fihaonamben'ny Bloguivianos ianao. Ahoana no fahatsapanao?
Traikefa nahafinaritra ny fandraisana anjara tamin'ny Bloguivianos. Talohan'ny nandehanako tao amin'ny Bloguivianos, tsy nanana namana nahalala momba ny bilaogy aho. Noho izany, tahaka ny tonga tao amin'ny trano misy varavarana tsirairay misokatra amin'ny fahagagana vaovao ny fihaonana tamin'ireo bilaogera hafa, izay efa ela niainana tamin'ity sehatra ity ny sasany. Tao no nahitako ireo bilaogera nasionaly samihafa tahaka an'i angelcaido, animaldeciudad, perrorabioso, urbandinos, reciclarte, palabraslibres, tevelision, ankoatra ny hafa.
Nanatrika fihaonambe mikasika ny vehivavy ao Santa Cruz ihany koa ianao. Inona no tanjon'izany fihaonambe izany? Heverinao ve fa fitaovana matanjaka ho an'ny vehivavy ao Bolivia ny bilaogy?
Tamin'ny volana septambra, notontosaina tao Santa Cruz ny Fivorian'ny Feminista Boliviana Faha-enina fanao isan-taona. Hitako fa zava-dehibe ny mahafantatra izay eritreretin'ny vehivavy any amin'ny tanàna hafa. Mino aho fa mety ho fitaovana mahasoa ho an'ny vehivavy ny bilaogy mba hahafahana mampiseho ny traikefanay sy ny toe-javatra iainanay. Saingy ilaina ihany koa ny manamarika fa adidy ho an'ny vahoaka maro ny fidirana amin'ny aterineto. Na dia misy aterineto aza any an-tanàna, dia mbola tsy misy any amin'ny tanàna antonony sy kelikely izany, ary mampihena ny fahafahan'ny fifandraisana ho an'ny olona maro.
Inona no manosika anao hanoratra sy hizara tantara momba ny fiainanao sy ny fiarahamoninao amin'ny aterineto?
Ny famahanana blaogy dia manome fahafahana hanoratra izay eritreretinao, ny fomba iainanao ny zava-misy iainanao. Nahazo aingam-panahy aho mba hanoratra sy hampiseho ny zava-mitranga amin'ireo vahoaka indizeny any Bolivia. Vitsivitsy ireo bilaogy izay manoratra mikasika ireo lohahevitra ireo ary noho izany dia mahatsapa aho fa voatery hanohy hanoratra mikasika izany.
Misy zavatra hafa tianao hotenenina amin'ireo mpamaky ny Global Voices ve?
Ry mpamaky ny Global Voices: Manoratra mihoatra ny 4000 metatra ambonin'ny ranomasina aho. Manidina avy eto izahay ary tonga any amin'ny solosainao mba hahafahanao mahafantatra zavatra momba anay ao amin'ity dia virtoaly ity.
Vaovao farany: Nandika lahatsary fohy niaraka tamin'i Cristina i Eduardo Avila.